Sida loo xisaabiyo cabirka sawirka dhijitaalka ah | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo xisaabiyo cabirka sawirka dhijitaalka ah
Lola curiel | | Design Graphic, General, Tricks
Xisaabinta cabirka sawirka dhijitaalka ah maahan wax dhib badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ereyo badan oo la xiriira leh sawirro dhijitaal ah iyo mararka qaarkood way fududahay in mid kale tan kale lagu qaldo. Kahor ogaanshaha sida loo xisaabiyo cabirka, waxaa muhiim ah in si cad loo fahmo fikradaha qaarkood, sida muxuu yahay sawirka dhijitaalka ah ama farqiga u dhexeeya cabirka dhijitaalka ama culeyska iyo cabirka jirka. Qoraalkan waxaan dhameyneynaa dhamaan shakigaas oo lagu daray waxaan ku bari doonaa sida loo xisaabiyo cabirka sawirka dijital ah Ha seegin!
1 Waa maxay sawir dijitaal ah
2 Fikradaha ay tahay inaad cadeyso markaad kahadleyso sawirada dhijitaalka ah
2.1 Qoto dheer midabka
2.2 Qaabka midabka
2.3 Cabirka sawirka dhijitaalka ah
3 Sida loo xisaabiyo cabirka sawirka dhijitaalka ah
Waa maxay sawir dijitaal ah
Sawir dijitaal ah ayaa ah matalaad laba-geesood ah oo muuqaal ah iyada oo loo marayo xoogaa yar. Waxoogaa ayaa ah unugga macluumaadka ugu yar, badiyaa ka kooban kuwo iyo eber. Ereyada cad, sawirka dhijitaalka ahi waa qaar badan iyo eber (macluumaad) in markii la isku daro ay soo saaraan sawir.
Waxaan ugu yeernaa sawirrada noocan ah, oo lagu sameeyay lambar binary ah khariidadaha. Waxaa loogu yeeraa taas, sababtoo ah xaqiiqda waa natiijada ku biirista dhibco badan ama pixels. Xaqiiqdii, haddii aad aado barnaamij tafatir ah, sida Photoshop, oo aad weyneeysid sawir kugu filan, waxaad awoodi doontaa inaad kala garato sawiradaas. Pixel kasta wuxuu ka kooban yahay xoogaa yar.
Fikradaha ay tahay inaad cadeyso markaad kahadleyso sawirada dhijitaalka ah
Qoto dheer midabka
La qoto dheer midabka wuxuu ula jeedaa tirada jajabka loo baahan yahay si loo qoro iyo keydi macluumaadka ku saabsan midabka ee pixel kasta. Tusaale ahaan, haddii ay tahay 1 xoogaa, kaliya 2 midab ayaa la qori karaa; laakiin haddii ay tahay 24-bit, 16,7 milyan oo midabo kala duwan ayaa la keydin karaa.
Habka midabka waa xaddiga ugu badan ee xogta midabka ee la dejiyey in la keydin karo. Tusaale ahaan, qaabka midabka RGB, wadar ahaan 16 milyan oo midab ayaa lagu keydin karaa (24-bit midab qoto dheer), halka haddii aan la shaqeyno qaabka monochrome, kaliya labo midab ayaa la keydin doonaa (1-bit oo qoto dheer oo midab ah).
Cabirka sawirka dhijitaalka ah
Cabirka sawirka dhijitaalka ah waxaa lagu qeexaa inuu yahay sheyga ltirada pixels ee sawirkani ku leeyahay balac by tirada pixels sare. Cabirka sawirka dhijitaalka ah, oo sidoo kale loo yaqaan miisaanka sawirka, ayaa badanaa lagu cabiraa bytes, MB, ama KB iyo in aan lagu khaldin cabirka jirka (kaas oo badanaa lagu cabiro cm). Sawir isku mid ah ayaa lagu daabacan karaa cabirro jireed oo kala duwan, sida sawirrada culeyskoodu ka duwan yahay lagu daabacan karo isla cabirka jir ahaaneed. Waxa go’aamiya cabirka dhijitaalka ah ee sawirka waa tayadiisa: weynaantiisa cabirkeeda, taasi waa, inta pixels ka badan ee ay ka kooban tahay, tayada ayaa sareysa. Haddii aan hayno sawir ka kooban pixels aad u yar, tayada waa la dhimayaa pixels-kaasna waa la arki doonaa.
Tusaale ahaan, haddii aan daabaco laba sawir oo dijitaal ah oo cabbirkoodu kala duwan yahay isla cabirka jir ahaanta, midka ugu pixels-ka badan (sawirka 1) ayaa u muuqda mid aan dhammaad lahayn ka wanaagsan kan kale (sawirka 2).
La tayada sawirka dhijitaalka ah waxaa sidoo kale loo yaqaan xallinta. Farsamo ahaan, qaraarku waa cufnaanta pixels, taasi waa, tirada pixels ee 1 inji (dpi).
Caqli ahaan, markuu yaraado culeyska sawirka, pixels ka yar ayaa sameysmi doona iyada oo pixels kayarna uu ku jiri doono inch kasta. Sidaa darteed xallinteeda ayaa ka sii xumaan doonta sawirka culus ee lagu daabacay isla cabirka jir ahaan.
Markaad go’aamiso waxa xalinta waad daabici doontaa, 200 ppi ama 300 ppi, tusaale ahaan, ma beddeli doontid baaxadda dhijitaalka ah ee sawirka, waxaad beddeshay waa cabirka jirka. Haddii aad ku daabacdo 200 ppi waxaad heli doontaa sawir weyn oo leh xal hoose. Haddii aad qaraarka gaarsiiso 300, sawirku wuu ka yaraan doonaa jir ahaan, maxaa yeelay waxaad codsaneysaa in tiro badan oo pixels ah lagu uruuriyo inch kasta, si taas loo gaarona cabirka jirku wuu yaraanayaa maxaa yeelay cabirka dhijitaalka ahi waa mid joogto ah.
Si aad u xisaabiso cabirka sawirka dhijitaalka ah ee bytes, waa inaan iska badinaa tirada wadarta pixels leh sawirka (pixels sare x pixels ballaaran) by miisaanka pixel kasta.
Si aad u ogaato culeyska pixel kasta, waa inaad tixgelisaa habka midabka. Tusaale ahaan, haddii ay tahay sawir RGB ah, waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan u kala qaadno 24-ka jajab 8, maxaa yeelay 1 xoogaa wuxuu u dhigmaa 8 baay. Haddii aad rabto inaad ogaato cabbirka KB kaliya waa inaad u qaybisaa natiijada 1024.
Si kastaba ha noqotee, kumbuyuutarka, adoo galaya astaamaha faylka, waxaad ka heli doontaa cabirka sawirka adiga oo aan dhibaato lahayn, Waxa ka sii adag ayaa ah ogaanshaha cabirka ay tahay inaad daabacdo sawir dijitaal ah si qaraarku u fiicnaado, Waxaan kuu keenayaa a khiyaamo taasi waxay badbaadinaysaa naftaada. Waad heli kartaa xisaabiyaha cabbirka internetka si aad ugu diyaariso shaqooyinkaaga daabacaadda oo aad ugu ciyaartid si ammaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo xisaabiyo cabirka sawirka dhijitaalka ah
Sida loo sameeyo saameynta midab-biyoodka ee Photoshop
5 qalab si boorar loogu sameeyo khadka tooska ah